Ukuhlala kweFama yeKharavani yaseBohemian enomtsalane
Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguDominique
Ikharavani yethu epholileyo ibiphethe abantu aba-2. Ibekwe phakathi kwegadi eqhelekileyo neneziqhamo. Indawo ezolileyo yokuphumla intloko emva kokuqhuba ixesha elide. Ngaphantsi kwe-2km ukusuka kwi-Pacific Hwy. Vuka uye kwiikhangaru, ii-wallabies kunye neentaka.
Amaqanda amatsha asefama amnandi ayafumaneka xa ufika.
Ikhitshi elincinane elinendawo yokutyela enikezelwa ngaphakathi nangaphandle.
2 izihlalo ezinkulu zebhentshi ngaphakathi. Kunye nendawo yokuhlala engaphandle enetafile encinci kunye neBBQ.
Igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye nendawo enkulu yokugcina
4.91 · Izimvo eziyi-236
Siyimizuzu eyi-10 kuphela ukuya kwiilwandle. Intloko enengca, i-Stuart's point river and beach, Middle head beach kunye nentloko yaseScotts.
Ivenkile enkulu enkulu yalapha elalini ibonelela ngepetroli kunye notywala kwaye kukho ivenkile yase-Eungai creek ethandekayo kakhulu ebonelela ngeegrosari kunye nokutya kwe-takaway ngoLwesine- ngoMvulo. Iihambo ezintle zasehlathini.
I-2km kuphela ukusuka kuhola wendlela.
Iindawo zasekhaya zibandakanya ipaki yomsedare, iimarike ze-Unkya ezibanjwe ngeCawe yokugqibela rhoqo ngenyanga. Umzekelo.. Feb, Epreli. Indawo yokujonga i-Yarrahapinni kunye nepikiniki, amatye aseMzantsi-Ntshona, i-Arakoon, i-Gladstone, i-Trial bay, i-Bellingen.
Sine-Eungai creek buffalo fama cafe ekufutshane nethengisa itshizi yobisi lwenyathi kunye neemveliso zenyama. Ivula ngoLwesihlanu 10-3pm nangoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku 6-9pm woodfire pizzas ziyafumaneka ukususela ngoLwesihlanu ebusuku ukuya kwisidlo sasemini ngeCawe. Ukubhukisha kubalulekile kwi-65699448
Kwakhona Hot myrtle ikhitshi kwi Grassy intloko rd inika ukutya okumnandi.
Sifumaneka nanini na. Ukuba iindwendwe zidinga nantoni na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Eungai Rail